पैसा बनाउने भए ब्रोकरलाई धेरै नसोध | NewsKarobar
गृहपृष्ठ पैसा बनाउने भए ब्रोकरलाई धेरै नसोध
ब्रोकर कार्यालयमा दिनहुँजसो सेयर लगानीकर्ताको भिँड हुने गर्छ । बजार घटेको बेला अलिक कम होला तर बढेको बेला भिँड बढी नै हुन्छ । बजार जति बढ्दै जान्छ भिँड त्यति नै बढ्छ । यो भिँडमा सबै पुरानै लगानीकर्ता हुन्छन् भन्ने छैन । नयाँ-नयाँ अनुहार पनि देखा परि रहेका हुन्छन् । नयाँ अनुहारमा कतिपय किन्ने, कोहि बेच्ने, कोहि बुझ्न, कोहि खाता खोल्ने हुन सक्छन् ।
ब्रोकर कार्यालयमा आउनेको रमाइलो बानी हुन्छ । जो भेटे पनि कुन किन्दा ठीक होला भनी उनीहरु सोध्ने गर्छन् । यसरी सोध्न मानिसहरु कति पनि हिच्किचाएको पाइँदैन । जसरी खैनी खाने, चुरोट पिउनेले कहिलै नचिनेको व्यक्तिसँग म पनि अलिकति खाउन वा म पनि एउटा चुरोट पिउन सक्छु भनेर सोधे जस्तै । चुरोटले जोड्ने सम्बन्ध दक्षिण एशियामा मात्र नभइ क्यानडामा पनि पाएँ । त्यहाँ पनि चुरोट पिउन लागेको कोहि नचिनेको मानिससँग म पनि एउटा लिन सक्छु भनेर अनुरोध गर्ने गरेको र चुरोट हुनेले स्वीकारेको पाएँ । तर, खानेकुरामा कहिल्यै त्यस्तो अनुरोध गरेको पाइनँ । यसको कारण हुन सक्छ मनोरञ्जनले विपरित ध्रुवका मानिसलाई एक ठाँउमा ल्याउन सक्छ ।
त्यस्तै बेच्दा ठीक वा किन्दा ठीक ? अहिले बढ्ला जस्तो छ कि घट्ला जस्तो छ? यस्ता अनेक प्रश्न नयाँ मात्र नभनौं पुरानाले पनि गरिरहेका हुन्छन् । जे-जस्ता प्रश्न गरे पनि सवैको उद्देश्य सेयर बजारबाट पैसा बनाउनु नै हो । पैसाको समुद्रका रुपमा लिइने यो बजारबाट सकेसम्म उघाउने प्रयास गर्नु नै हो ।
लगानीकर्ताले ब्रोकर कार्यालयमा भेटेकालाई मात्र नभइ ब्रोकरलाई पनि त्यस्तै प्रकारका प्रश्न राख्ने गर्छन । धेरैलाई विश्वास हुन्छ, ब्रोकरले भनेपछि कसो नहोला । दैनिक सेयर कारोबार गर्ने र धेरै लगानीकर्तासँग अन्तरक्रिया गरिरहने भएकाले पनि उनीहरुप्रति लगानीकर्ताले विश्वास बढाएका हुन्छन् । उसले केहि न केहि बुझेको हुन्छ वा सूचना थाहा पाएको हुन्छ भन्ने लगानीकर्ताको विश्वास हुन्छ ।
तर, ती प्रश्न गर्ने लगानीकर्ताले नबुझेको के भने ब्रोकर पैसा बनाउन कै लागि व्यवसाय गरिरहेको हुन्छ। उसको प्रमुख आम्दानी भनेको कमिसन हो । कमिशन कारोबारमा भर पर्छ । कारोबार भए कमिसन, नत्र नो कमिशन । जति बढी कारोबार त्यति धेरै कमिशन । जति धेरै कमिशन त्यति राम्रो व्यवसाय र नाफा । यसैले अल्पकालिन कारोबारी हाबी भएमा ब्रोकरको व्यवसाय पनि फस्टाउँदै जान्छ । दीर्घकालिन लगानीकर्ता बढी भए र कारोबार घट्न गएमा कमिशन पनि कम हुन जान्छ । व्यवसाय धरापमा पर्न जान्छ । जसरी २०६५/६६ ताका सेयर बजारमा आएको वियरिस ट्रेन्डसँगै घटेको कारोबार रकमले केहि ब्रोकर कार्यालय बन्द हुने अवस्थामा पुगेका थिए । केहि ब्रोकर कार्यालय बिक्री पनि भए ।
अल्पकालिन भन्दा दीर्घकालिन कारोबारीले बढी पैसा बनाउने अनगिन्ति अध्ययनले देखाइ सकेका छन् । यसैले राख्दा ठीक कि बेच्दा ठीक भनेर ब्रोकरलाई प्रश्न गर्नु वा अहिले किनौं कि पर्खौं भनेर सोध्नु पुरै गलत त हैन तर ब्रोकर पनि बाँच्नु पर्छ उसले आफ्नो व्यवसाय डुबाएर लगानीकर्तालाई उकास्ने गरी सुझाव दिनेवाला छैन । अरुलाई बचाउनुअघि आफ्नो सुरक्षालाई ख्याल गर । त्यसैले ब्रोकरले आफ्नो व्यवसायलाई टिकाइ राख्न पनि कारोबारको सुझाब दिने गर्छ ।
बेचौं कि राखौं भन्ने प्रश्नमा ब्रोकरले भन्न सक्छ ‘मलाइ त बेच्दै ठीकजस्तो लाग्छ तपाईंकै विचार ।’यो कम्पनीको किन्दा कस्तो होला भन्ने प्रश्नमा उसले भन्न सक्छ, ‘योभन्दा अर्को कम्पनी चाँहि ठीक लाग्छ है मलाई, बाँकी निर्णय तपाईं नै गर्नुस् ।’
यस्तै अहिले किन्दा कस्तो होला भन्ने प्रश्नमा ‘यो मूल्य ठीकै जस्तो लाग्छ ।’
ब्रोकरलाई धेरै सोधे पैसा तपाईंले हैन उसले बनाउँछ । ब्रोकर बजारबाट पैसा बनाउन बसेको हैन सेयर कारोबारीबाट पैसा बनाउन व्यवसाय गरेको हो । चार्लिज डि इलाइजले आफ्नो पुस्तक विनिङ द लुजर्स गेममा लेखेका छन- सेयर ब्रोकर र म्युचुल फण्ड एजेन्टबीच कन्फ्युज नहुनु (नअल्मलिनु) होस्, उनीहरु धेरै राम्रा हुन्छन । तर, उनीहरुको काम तपाईंलाई पैसा बनाइदिने हैन । उनीहरुको काम भनेको तपाईंहरूबाट पैसा बनाउने हो । त्यसैले सेयरमा पैसा बनाउने हो भने ब्रोकरलाई के गरौं भनेर धेरै नसोध्नु नै राम्रो । कारोबार भए उसको व्यवसाय चल्छ नत्र बन्द गरेर अर्को जागिर वा व्यवसाय खोज्नुपर्छ ।
त्यही भएर उसको जोड जतिसक्दो कारोबार बढाउन मै हुन्छ । उसका जवाफ प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा कारोबार बढाउने प्रकारका हुने गर्छन् । सुझाब दीर्घकालिन भन्दा अल्पकालिनमा बढी हुन्छ । अल्पकालिन कारोबार सेयर बजारमा पैसा बनाउन चाहनेका लागि फाइदाजनक बन्न सक्दैन । ब्रोकरले पैसा बनाउनका लागि उसलाई कारोबार चाहिन्छ नत्र अर्को कुनै काम खोज्नुपर्ने हुन्छ । यसकारण पनि सेयर बजारका हरेक तल माथिबाट नाफा हत्याउने प्रयासले तपाईं धनी बन्ने कुनै निश्चित छैन तर नेप्से, धितोपत्र बोर्ड र ब्रोकर भने अवस्य धनी बनिरहेका हुनेछन् । किनकि, उनीहरुले हाम्रो हरेक कारोबारबाट कमिशन लिइरहेका हुन्छन्।
प्रकाशित समय १३:४४ बजे
पछिल्लाे - पुल भत्किएपछि परा राज्यमा संकटकालको घोषणा
अघिल्लाे - अमेरिकामा शृंखलावद्ध गोलीकाण्ड, एकको मृत्यु